कर्मको फल : मुख्यमन्त्री शेरधनलाई बमबाट बचाउने देवकोटा सईमा बढुवा !
ARCHIVE, POLITICS » कर्मको फल : मुख्यमन्त्री शेरधनलाई बमबाट बचाउने देवकोटा सईमा बढुवा !
काठमाडौँ – प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई चुनावका बेला आक्रमणकारीबाट जोगाउने प्रहरीको बढुवा भएको छ । नेकपाका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका राईलाई गत कात्तिक २८ मा भोजपुर सदरमुकामदेखि टेम्के मैयुँ गाउँपालिकाको कोटतर्फ चुनावी सभामा जाँदै गर्दा राई चढेको गाडीमा बम प्रहार गरिएको थियो ।
वम आक्रमणबाट जोगाउने प्रहरी सहायक निरीक्षक डिल्लीबहादुर देवकोटा प्रहरी नायव निरीक्षकमा बढुवाका लागि सिफारिस भएका हुन् । आइतबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बसेको पुलिस कोअर्डिनेसन कमिटीको बैठकले असई देवकोटालाई सईमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको छ ।
भोजपुरको प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ‘ख’ बाट तत्कालिन एमालेका उम्मेदवार रहेका पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री राईमाथि विप्लबका कार्यकर्ताले गत कार्तिक २८ मा बम आक्रमण गरेका थिए । राई चढेको गाडीलाई लक्षित गरि बम प्रहार भएपछि सुरक्षा गार्ड देवकोटाले २१ राउण्ड गोली प्रहार गरेका थिए । घटनामा देवकोटा घाईते भएका थिए ।
साथै डोल्पाका दुर्गम कालागौडा प्रहरी चोकीमा कार्यरत प्रहरी जवान भक्तबहादुर थापा पनि हवल्दारमा बढुवाका लागि सिफारिस भएका हुन् । उनले चौकीमा विरामी भएका आफ्ना साथी दलबहादुर थापालाई राति पाँच घण्टा बोकेर स्वास्थ्य चौकी पुर्याएका थिए ।
प्रकाशित : Sunday, June 03, 2018
बैशाख १२ सम्झाउनेगरी एकाविहानै काठमाडौँमा शक्तिशाली भूकम्पको धक्का महसुस, केन्द्रविन्दु नौबिसे !
Third Angle : कमेडीका नाममा बैंककै ब्राण्डमाथि दखल, एनबी बैंकलाई 'भद्रगोल'ले बनायो 'डामाडोल बिकाश बैंक'
बालुवाटारको जग्गा ब्यक्तिको नाममा हत्याउने डाक्टर सापले कुमारी बैंक छोडे, सञ्चालक पदबाट राजीनामा !